नेता, स्वास्थ्य संस्था र दुर्गती | नेता, स्वास्थ्य संस्था र दुर्गती – हिपमत
नेता, स्वास्थ्य संस्था र दुर्गती
नेपालमा पहिलोपल्ट एयर एम्बुलेन्स चडी विदेश उपचार गर्न जाने सौभाग्य पाए पुर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गिय गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यसपछि एमाओवादी नेता जनार्दन शर्मा प्रभाकरले भने पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीको चर्चा छ । नेपाली नेताहरु अलिकति तलमाथी वा गिलो साह्रो केही भएमा भारत तिर दौडिन्छन् । एक काम दो पन्त्त भने जस्तो उपचार पनि गर्ने चाकरी पनि गर्ने दाउ हुन सक्छ । अहिले सम्म नबुझेको कुरो उपचार मात्र गराउन नेताहरु जान्छन् कि अरु केही गर्न । यदी उपचार मात्र गर्न गएका हुन् भने के नेपालमा स्वास्थ्य संस्थाहरु छैनन् ? के नेपालको स्वास्थ्य संस्थामा उपचार हुदैन ? के यहां डाक्टर छैनन् ? के यहा उच्च स्तरीय उपचार सेवा उपलब्ध छैन ? यी र यस्ता तमाम प्रश्नहरु हामी जो कोहीको मनमा मढारिरहेका छन् । अहिले सम्मको नेताहरुको कार्यशैलि र स्वास्थ्य उपचारको प्रवृत्ति हेर्दा नेपालका स्वास्थ्य संस्था विचरा रहेछन् र हेपिएका रहेछन् । यहां त उपचार नै पो हुदोरहेनछ । यहां त मान्छे मार्ने काम मात्र हुदो रहेछ जस्तो आभास भएको छ । गरिव देशका घनी नेताहरु कोही भारतमा त कोही सिंगापुर र अमेरिकामा गएर स्वास्थ्य उपचार गरेको देख्दा यहांका स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य सेवाको उपहास भए जस्तो लाग्दछ । स्वास्थ्य सेवा लिन पाउने मानिसको नैसर्गिक अधिकार हो । नेपालमा स्वास्थ्यको नाममा खेलवाड भै रहेको छ कि भन्ने आशका छ ।
नेपाली नेताको यस्तो विदेशी स्वास्थ्य उपचार मोहले आश्र्चयमा पारेको छ सवै नेपालीलाइ । यिनै नेताहरु हुन् जो देशको विकास गर्छु भन्छन् , स्वास्थ्य क्ष्ँेत्रको विस्तारको नारा लगाउदछन् वा भनौ स्वास्थ्य निती निर्माण गर्दछन् । यस्ता प्रायशः नेताहरु विदेशी भूमिमा स्वास्थ्य उपचार गरेर के को संकेत गरिरहेका छन् ? यस्ता तमाम प्रश्नहरु नेपालीको मनमा उब्जिएका छन् । नेताहरुले नै देशको बागडोर हाकेका हुन्छन् । नेता नै हो स्वास्थ्य मन्त्री बन्ने तर आज तिनै नेताहरु जो विदेशी भूमिमा उपचार गराउन जाने गर्दछन् । यसबाट सारा नेपालीले के आशा गर्ने नेताहरुले स्वास्थ्य क्षेत्रको विस्तार गर्लान भनेर । आज देशमा स्वास्थ्यको स्थिती भयावह छ । उपचार त के सिटामोल सम्म नपाएर कयौ नेपाली मृत्युवरण गरिरहेका छन् । नेपालको कुना कन्दरामा वसोवास गर्ने, ग्रामिण क्षेत्रमा वसोवास गर्ने हजारौ नेपालीहरु उपचारको अभावमा दिनदिनै मरिरहेका छन् । नेपालको वर्तमान स्वास्थ्य सेवाको अवस्था दिनदिनै नाजुक बन्दै गइरहेको छ । सरकारी अस्पताको दुरावस्था छ । प्राइभेट अस्पतालले महगो शुल्क लिएर उपचारको नाममा नेपालीको ढाड सेकिरहेका छन् । धेरै नेपाली गरिविको रेखामुनी रहेको विभिन्न तथ्याकले देखाइरहेको वेला महगो शुल्क तिरेर उपचार गर्ने अवस्थामा छैनन् । पचास बर्ष अगाडीको जंनसंख्याको लागि वनाइएका भौतिक पूर्वाधारहरु दिनदिनै जिर्ण बन्दै गइरहेका छन् । स्वास्थ्य क्ष्ँेत्रको वेतिथिको कुरा गरी साध्ये छैन । स्वास्थ्य क्षेत्रमा तमाम विसगतिहरु रहेका छन् । आवश्यक स्वास्थ्य संस्थामा दरवन्दी अनुसारका डाक्टर र नर्सको व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । नेपालका अस्पतालले एउटा रोग छ उपचार अर्के गर्ने गरेका छन् । धेरै नेपालीहरु सुविधायुक्त उपचार नपाएर रोग बोकेर हिडिरहेका छन् । समय अनुसारको प्रविधिको उपलब्धता गराइएको छैन । स्वास्थ्यका नाममा हुने कयौ भ्रष्टाचारलाई न्यूनिकरण गरिएको छैन । गरिव नेपालीलाई हात मुख जोड्ने समस्या हुदा हुदै उपचार गर्ने रुपया पैसाको चरम अभाव भै रहेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालीहरु समय सापेक्ष्ँ उपचारको अभावमा राम्रो उपचारको लागि सरकारलाई अपिल गरिरहका छन् ।
नेपाली नेताहरुले यस्ता तमाम नेपाली जनतासंग प्रत्यक्ष जोडिएको स्वास्थ्थ सवालमा राहत दिएका छैनन् । देशको स्वास्थ्य सेवालाई चुस्त दुरुस्त राख्न सकेको छैन । जनसंख्याको आकार अनुसार स्वास्थ्य उपचार र स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । हुनत नेताले नै सरकार चलाउने हो । प्रजातान्त्रिक मुलुकमा नेताले नै जनताको स्वास्थ्य उपचारमा चिन्तित हुनु पर्ने हो । यहां त नेतालाई तमाम नेपालीहरु मरुन या बाचुन के मतलव उनीहरु विदेश गएर भए पनि उच्च स्तरको उपचार गरिहाल्छन् । नेपाली नेताहरुले पनि जनताको करबाट उठेको रुपयां पैसा खर्च गरेर उपचार गर्ने हुन् । होइन भने नेताको औपचारिक कमाई कति छ र ? उनीहरु विदेश गएर उपचार गर्दछन् ? यो प्रश्न गम्भिर छ । नेपालमा धेरै समयसम्म बाच्नु छ भने नेता नै हुनु पर्ने रहेछ भन्ने भावनाको विकास भएको छ । नागरिक भयो भने त अल्पआयुमा नै मर्नु पर्ने रहेछ भन्ने सार्थक सन्देश नेताको क्रियाकलापले दिएको छ र नेपाली चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई झाप्पड हानेको छ । नेपालको स्वास्थ्य संस्थाको प्रगति गर्नु पर्ने ठाउमा नेताहरु आफ्नो मात्र स्वास्थ्य उपचार गर्छन् । स्वास्थ्य संग सम्वन्धित जटिल विषयवस्तुलाई बेवास्ता गर्दै नेताहरु नेपाली नागरिकलाई गिज्याइरहेका छन् । विदेशी भूमिमा उपचार गर्ने नेताले नेपालमा स्वास्थ्य सुविधा छ भन्नु लज्जास्पद कुरा हो । यदी नेपाली नेताहरु यथार्थमा नेपाली हुन् भने नेपालमा स्वास्थ्य उपचार गर्न सक्नु पर्दथ्यो । के नेपालमा मुत्र नलीको ढुगा झिक्न सक्ने नेपाली चिकित्सक छैनन् के नेपालमा ज्वरो निको पार्ने चिकित्सक छैनन् ? धिक्कार छ नेता ज्यू कस्ता जनशक्ति उत्पादन गर्नुहुन्छ ? कस्ता विश्वविद्यँलय चलाउनु हुन्छ ? कस्ता शैक्षिक संस्था वनाउनु भएको छ ? आज सानो भन्दा सानो रोगको उपचार गर्न विदेश धाउनु परेको छ । यहाका नेतालाई अलिकति पनि लाज घिन र सरम लाग्दैन ?
नेपाली नेताको यस्तो चरित्रले नेपालका स्वास्थ्य कर्मीहरुको मनोवल गिरेको छ । स्वस्थ्यकर्मीको भावनामा खेलवाड भएको छ । उनीहरुको आत्मामा ठोस पुगेको छ । आफुले हासिल गरेको शैक्षिक उपाधिमा प्रश्नचिन्ह खडा गरिदिएको छ । सवै नेतालाई नेपालका स्वास्थ्यकर्मी प्रति अविश्वास रहेछ अव तिनै नेताले सक्ष्ँम स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन गर्ने तर्फ सोच्ने वेला आएको छ । नेपाली चिकित्सकलाई आधुनिक र सुविधा सम्पन्न बनाउने तर्फ सवै विदेशी भूमिमा उपचाररत् नेताले विचार गर्ने वेला आएको छ । नेपाली स्वस्थ्यकर्मीलाई सुविधा सम्पन्न बनाइनु आवश्यक छ फेरी पनि यस कामको लागि त नेता ज्यूहरुले नै सोच्नु पर्दछ । अव नेताहरुले विदेशी उपचार पाउनु पर्छ भनेर नेपालको संविधानमा लेख्नु पर्दछ । होइन भने जनताको स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्न पाइदैन । नेपाली माटोमा उपचार गर्नु पर्दछ, नेपालका जनशक्ति मार्फत सेवा लिनु पर्दछ । होइन भने सम्पूर्ण नेपालीलाई विदेशी स्वस्थ्य संस्थामा उपचारको प्रवन्ध गर्नु पर्दछ । आफु चाहि बाच्ने अरु गरिव नेपालीहरु चाही मरुन भन्ने भावनाले विदेशी मुख ताक्ने हो भने भोलीका दिनमा त्यस्ता देश चुस्ने पिसाचुहरुलाई जनताले छोड्दैनन् । त्यसकारण देश र जनतालाई भ्रममा नपारी सवै नेपालीको स्वस्थ्यमा ध्यान दिनु र चहराई रहेको घाउमा मलम लगाउनु आजको आवश्यक हो । त्यसका लागि नेताहरु गम्भिर बन्नै पर्दछ । नेता मात्र बाच्ने जनता मर्ने हो भने नेपालका नेताको राजनिति सकिन्छ । त्यसकारण समयमा नै सवैको लागि युग सुहाउदो उपचार पद्धतीको व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ ।